राजनीतिको रंग मिसिएको अर्को गज़ल – Krishna Thapa
शकुनीको टेढो चाल, चालेको छ यहाँ कसले
अमृत भनी मिठो बिष हालेको छ यहाँ कसले ?
भोको नाङ्गो भएँ भन्दै, घुर्क्याउँदै आमासँग
देशै खाने अभियान थालेको छ यहाँ कसले ?
राष्ट्रघाती भूकम्पले थर्काएर आज आफ्नै
स्वाभिमानको धरहरा, ढालेको छ यहाँ कसले ?
चिसो चुल्हो नजलेको, धेरै दिन भयो भन्दै
घरै जलाउने आगो, बालेको छ यहाँ कसले ?
अति भयो ब्यूँझ साथी, निमोठ्नु छ शीर त्यसको
दुध खुवाई सर्पलाई, पालेको छ यहाँ कसले ?
उठाएर हेर आजै, किन भुत्ते भो खुकुरी ?
खिया लाग्ने गरी कतै फालेको छ यहाँ कसले ?
कृष्णपक्ष थापा, धादिङ
यसलाई फेसबुकमा यहाँ पढ्न सकिन्छ